Baro gabadha Soomaaliyeed ee sababta u ah guusha kiiska badda | KEYDMEDIA ONLINE
Baro gabadha Soomaaliyeed ee sababta u ah guusha kiiska badda
Muna Al-sharmaani, ayaa si weyn loo bartay xilligii ay socotay dhageysigii 1-aad ee dacwada badda ee dowladda Soomaaliya geysay ICJ 2014-kii.
MUQDISHO, Soomaaliya – Saacadihii la soo dhaafay, waxaa si weyn baraha bulshada u qabsaday dabbaal-deg hordhac ah oo ku saabsan natiijada laga filayo, in ay ka soo baxdo go’aanka kama danbeysta ah ee saacahada soo socda ay kiiska badda Soomaaliya ka gaareyso Maxakamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ).
Marka laga yimaado, dareenka shacabka, waxaa jira siyaasiyiin caan ah, oo horraanba billaabay in ay olole doorasho u adeegsadaan kiiska badda, waxaana caawa la filayaa in dhowr munaasabadood oo kala duwan ay Muqdisho ku kala qabtaan siyaasiyiinta caanka ah, kuwaas qaarkood ay dalbadeen in loo dhiso taallooyin ay ku muteysteen kaalntooda la xaiirta kiiska badda.
Hadaba waxaan qoraalkaan kuugula wadaageynaa, qofka mudan iyo kiiskaan lagu sharfo billad geesi ahna la siiyo, waa qof aan ku faanin shaqada qaaliga ah uu qaanka u qabatay, sida siyaasiyiinta kale, waana ruuxii lahaa maskaxda maaxatay in ICJ loo gudbiyo dacwada badda Soomaaliya ee Kenya qeyb ka mid ah calaamadeystay 2005.
Waa Muna Maxamed Al-sharmani, oo aheyd qofkii lahaa maskaxda iyo hindisaha in kiiska badda la geeyo maxakmadda, kaliya intaas ma aysan lahayn, ee sidoo kale, waxa ay ahayd, dadkii ugu mihiimsanaa ee u istaagay difaaca, isla-markaana doodo adag ka jeediyay dhageysigii dhacwada sanadkii 2016.
Muna Al-sharmani, waxaa ay Jaamacadda the Johns Hopkins, ka heysataa shahaadada PhD, waxayna baratay Xiriirka Caalamiga iyo Dhaqaalaha, halka ay Jaamacadaha Harvard Law School iyo Qaahira, ka diyaarisay kuliyadda qaanuunka, sidoo kale, waxa ay baratay Maalgelinta Caalamiga.
Muna Al-Sharmani, waxaa si weyn loogu tixgaliyaa qibraddeeda shaqo, ee ka badan 20-ka sano, taas oo ku aaddan la shaqeynta hay’adaha qaanuunka, waxayna la soo shaqeysay Gotshal, Weil, King and Spalding iyo kuwo kale.
Hadaba sida wareysi ay bixisay ay ku sheegtay, Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan, Muna Maxamed Al-sharmani, ayaa masuul ka ahayd in kiiska dacwada badda loo gudbiyo ICJ.
Marwo Fowsiya, oo ka hadleysay sida ay ku timid dacwada, ayaa sheegtay in ay Mareykanka kula kulantay Muna, oo xilligaas u shaqeyneysay UNCLOS, taas oo ku wargalisay in badda Soomaaliya ay u dacan tahay dalalka Yemen, Kenya iyo Seychelles.
Wasiir Fowsiya, waxa ay xustay in Muna ay timid Muqdisho, si ay Madaxweyhii xilligas Xasan Sheekh Maxamuud ula wadaagto, in ay badda Soomaaliya ay u dayacan tahay dalalka darirska, loona baahan yahay in si sharci ah looga hortago.
Fowsiya, waxa ay sheegtay in Madaxweyne Xasan Sheekh, uu qaatay talada ay soo jeedisay Muna, oo ahayd in dacwada kiiska badda loo gudbiyo ICJ, waxayna Al-sharmani, ka mid noqotay shaqsiyaadkii hor-kacayay ergadii mataleysay Soomaaliya xilligaas.
Farmaajo, ayaa ka hor istaagay in dhameystirto shaqada ay billowday, kadib markii uu kala diray guddii maxakamadda geeyay dacada 2014-kii, hayeeshee, shacabka Soomaaliyeed ayaa Muna ku tixgalinaya kaalinta dahabiga ah oo ay ka qaadatay kiiskan.